बुधबारको चन्द्र ग्रहण किन विशेष छ ? - News 88 Post
राशिफल वास्तु ज्याेतिष
May 25, 2021 N88LeaveaComment on बुधबारको चन्द्र ग्रहण किन विशेष छ ?
बुधबारको सुपर मून वर्ष सन् २०२१ को दोश्रो सुपरमून हो । यसअघि गत अप्रिल २६ मा पहिलो सुपर मून देखिएको थियो । हुन त यो पटकको चन्द्रग्रहण नेपालबाट देख्न पाइने छैन । किनकि आकाशमा चन्द्रोदय हुनु अगाडि नै चन्द्रग्रहणको अवधि सकिने छ । तथापि, उत्तर अमेरिका, पश्चिमी र दक्षिणी अमेरिका र पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा खग्रास चन्द्रग्रहण देखिने छ । त्यस क्रममा १४ देखि १५ मिनेटसम्म रातो चन्द्रमा देखा पर्नेछ ।
खगोलविद्ह‍रूका अनुसार हरेक अढाई वर्षमा एकपटक चन्द्र ग्रहणको बेला रातो चन्द्रमा देखिन्छ ।
चन्द्र ग्रहणका क्रममा चन्द्रमा पृथ्वीको छायामा पर्दछ । यहीँ क्रममा क्रममा कुनैबेला चन्द्रमा पूर्ण रूपमा रातो पनि देखिन्छ । त्यसलाई ब्लड मुन भनिन्छ । नासाका अनुसार सूर्यका किरणहरु पृथ्वीको वातावरणमा छिरेसँगै केही मोडिन्छन् र फैलिन्छन् । निलो र बैजनी रंग रातो र सुन्तला रंगभन्दा धेरै फैलिन्छ । सोही कारण आकाशको रंग निलो देखिन्छ । रातो रंग सिधा दिशामा अगाडि बढ्छ, सोही कारण सूर्योदय र सूर्यास्तको बेलामा मात्रै आकाश रातो देखिन्छ । त्यसक्रममा सूर्यको किरण धर्तीको वातावरणको एक बाक्लो तह पार गरेर हाम्रो आँखासम्म पुग्दछ ।
हलेसी महादेवकाे चाेखाे मनले दर्शन गरी हेर्नुस् आजको राशिफल
प्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा बालुवाटार बोलाउनु शुभ सङ्केत होइन : बाबुराम
July 19, 2021 N88
सनिबारकाे दिन गर्नुस् यी ५ काम मिल्नेछ चमत्कारिक लाभ
हिन्दू धर्मका यी २५ अनौठा तथ्यहरु, के तपाईँलाई थाहा छ ?